UWilma Rudolph (1940-1994)
"Owesifazane okhawulezayo kwihlabathi" kuma-Olimpiki e-1960 apho aphumelele khona iindondo ezintathu zegolide, uWilma Rudolph wayenxibe imilenze yentsimbi kwimilenze yakhe njengomntwana. Eyaziwayo ngesithunzi sakhe nobabalo, uWilma Rudolph wabulawa ngumhlaza wengqondo ngo-1994.
Iimpawu ezikhethiweyo zeWilma Rudolph
• Ungalokothi uchithe amandla amaphupha kunye nempembelelo yomoya womntu. Sonke sifanayo kule ngcamango. Ubuchule bokuba nobukhulu buhlala phakathi kwethu ngamnye.
• Oogqirha bandixelela ukuba andiyi kubuya kwakhona. Umama wandixelela ukuba ndiza. Ndikholelwa umama.
• Inkolelo ayinakuyenza ngaphandle komzabalazo. Kwaye ndiyazi ukuba ngumzabalazo onjani. Ndichitha ixesha lokuphila ndizama ukuxelela oko kuthetha ukuthini ngowesifazane kuqala kwihlabathi lemidlalo ukuze abanye abasetyhini abaselula bafumane ithuba lokufikelela amaphupha abo.
• Andizami ukuba ngumzekelo, ngoko ndiyazi ukuba ndikhona okanye ndingenjalo. Kungenxa yabanye abantu ukugqiba.
• Ndiyabatshela ukuba into ebalulekileyo kukuba wena kwaye uzithembele kuwe. Ndibakhumbuze ukuba ukunqoba akukwazi ukuba nako ngaphandle komzabalazo.
• Kungakhathaliseki ukuba uphumelela ntoni, umntu unokunceda.
• Ndicinga ukuba andizange ndize ndibone oko. UFlorence Griffith Joyner - rhoqo xa egijima, ndagijima.
• malunga nemilenze yakhe yomlenze: Ndichitha ixesha elide ndizama ukucinga indlela yokuzikhupha ngayo. Kodwa xa uvela kwintsapho enkulu, enhle, kukho indlela yokuphumeza iinjongo zakho.
• Ndahamba ngeebhondi de ndade ndandineminyaka engama-9 ubudala. Ubomi bam bebufana nomntu oqhelekileyo okhulile waza wagqiba ekubeni angene emhlabeni wezemidlalo.
• Umama wandifundise kakhulu ukukholelwa ukuba ndinokuphumeza nayiphi na intsebenzo endiyifunayo. Eyokuqala kwakuhambahamba ngaphandle kobunzima.
• Ndagijima ndagijima ndagijima imihla ngemihla, kwaye ndafumana le ngqiqo yokuzimisela, lo mqondo womoya ukuba andizange ndize ndilahle, kungakhathaliseki ukuba kwenzekani enye into.
• Ngethuba lokuba ndibe ngu-12 ndayinomngeni kumfana osekuhlaleni, ekuxumeni, yonke into.
• Ukuvakalelwa kwempumelelo kufakwe ngaphakathi kwam, iindidi ezintathu zegolide zeOlimpiki. Ndiyazi ukuba yinto engekho umntu onokumthabatha kum, ngonaphakade.
• Xa ndihamba ngenguqu yokuba ndiyaziwayo, ndazama ukumbuza uThixo kutheni ndilapha? yayiyintoni na yam injongo? Ngokuqinisekileyo, kwakungekhona nje ukuphumelela iindondo ezintathu zegolide. Kufuneka kubekho oku ngakumbi kule nto kunoko.
• Wenzani emva kokuba udume umhlaba wonke kwaye uneshumi elinesithoba okanye anamashumi amabini kwaye uhleli kunye nabaphathiswa be-prime, ookumkani kunye namakhosikazi, uPapa? Ngaba ubuyela ekhaya uze uthathe umsebenzi? Yintoni oyenzayo ukugcina ucoceko lwakho? Uya kubuya kwihlabathi lenene.
• Xa ilanga likhanya ndiyakwenza nantoni na; akukho ntaba iphezulu kakhulu, akukho nkathazo nzima.
• Ndiyakholwa kum ngaphezu kweliphi le hlabathi.
Izibonelelo ezinxulumene noWilma Rudolph
Abafazi kwi-Track and Field
Hlola iiNkcazelo zaBasetyhini kunye neMbali yabasetyhini
IiNkwenkwe zaBasetyhini - malunga neeNgqapheli zabasetyhini
Namhlanje kwiMbali yabasetyhini
Iqoqo le-Quote ehlanganiswe nguJone Johnson Lewis. Iphepha ngalinye lokucaphulwa kule ngqokelela kunye nokuqokelela konke © Jone Johnson Lewis 1997-2005.
Le ngqokelela engaqhelekanga ihlanganiswe kwiminyaka emininzi. Ndizisola ngokuba andinako ukubonelela umthombo wendalo xa ungabonakali kunye nesicatshulwa.
UJone Johnson Lewis. "UWilma Rudolph Quotes." Malunga neMbali yabafazi. URL: http://womenshistory.about.com/od/quotes/wilma_rudolph.htm. Umhla ufinyelelwe: (namhlanje). ( Ngakumbi malunga nendlela yokukhankanya imithombo ye-intanethi kuquka le khasi )
Iimpawu zeMarian Wright Edelman
Imfazwe ye-1812: uLieutenant General Sir George Prevost
Imfazwe Yokuqala yaseMarne
Ukufaka iPP kwi Linux
10 I-Cuttlefish Facts
Yenza iCristiano Ronaldo Inyathelo elingaphezulu
Iimifanekiso zeVampire zeStampire eziMinyaka edlulileyo